Kwabaningi, igama elithi "offal" lihlotshaniswa okuthile osezingeni eliphasi. Kukholakala ukuthi lokhu kudla kunikeza inyama kuzo zonke izici. Nokho, kuyinto sibi. Ezinye by-imikhiqizo amaminerali okuningi namavithamini.
A-umkhiqizo - kuyini?
Kuye zinhlobo imfuyo kukhona yenkomo, ingulube kanye newundlu offal. Leli gama libizwa izibilini, kanye hhayi izingxenye ezibalulekile kakhulu izidumbu zezilwane ipulazi. Zonke by-imikhiqizo zingafani ukunambitheka kanye umsoco. Ngokuqondene nalokhu izigaba ezimbili offal. Isigaba sokuqala sihlanganisa labo kwezitho izingxenye izidumbu ukuthi babe okusezingeni eliphezulu ukubaluleka yokudla okunempilo ngenxa okuqukethwe kwabo inqwaba izinto eziphila abakhuthele. Leli qembu uhlanganisa inhliziyo, ingqondo, isibindi, izinso, ulimi, diaphragm, umbele, inyama-imisila. Eqenjini lesibili kukhona by-imikhiqizo kokuba ongaphakeme umsoco: inhloko, emaphashini, imilenze, izindlebe, isisu, kuqhoqhoqho.
Inyama kanye nenyama imikhiqizo athandwa ngokulinganayo phakathi kwabantu. izinga wabo ngeso elibukhali inyama izitshalo, futhi ngesikhathi amaphuzu yedivayisi yokuthengisa. Izinhlobo ezithile offal elakhiwa igazi, futhi inani elikhulu amagciwane kanye enzyme esebenzayo. Ukuba khona ukukhubazeka okunjalo kufanele isikhishiwe, kusukela ukusetshenziswa ukudla okunjalo kungabangela izinkinga zempilo ezingathí sina. Inyama by-imikhiqizo kumele kahle sihlanza kwegazi nokungcola futhi akufanele ukukhombisa izimpawu ukuwohloka. Isibindi ekhululwa lymph node, nenyongo sesinye futhi Bile mapayipi. Umbala isibindi fresh kufanele kube esinsundu noma ukukhanya brown. Nge ulimi isuswe amafutha kanye ezicutshini. umbala yayo ukuncishiselwa kufanele zifane.
ongelutho Simple kufanele wazi abanye imithetho ngazo kungacacisa ukuthi noma ngabe izinga phambi kwakhe ovela eceleni ka okungukuthi - ukudla okunempilo noma ushevu. Umkhiqizo okuthengiswa chilled noma eqandisiwe. Kungaba wonkana, futhi uthathe yizicucu. Ukuqalisa imikhiqizo kabusha eqandisiwe noma incibilikiswa akuvunyelwe nhlobo. Futhi, uma ubona izinyembezi noma ukusikeka ku iphakethe, kubalulekile ukuba ugweme ukuthenga. umbala okungesona esingokwemvelo umkhiqizo kubonisa ukuthi asifanele ukusetshenziswa. Ukuthenga imikhiqizo esiphelelwe yisikhathi noma enephutha kungabangela umonakalo omkhulu empilweni. Kunzima ngempela ukuba wahlulele izinga ukudla eqandisiwe. Kungcono makudle fresh futhi sigodole-imikhiqizo. nephunga alandisa elibushelelezi, elinombala yemvelo uzokutshela ukuthi mikhiqizo udliwe ungakwazi.
Inyama yenkomo, inyama yengulube, iwundlu offal zinhle empilweni. Ziqukethe zinc, insimbi, potassium, i-phosphorus, i-magnesium, kanye namavithamini C, E, A, K, E, PP. I amaprotheni kufakwe Ukwakheka yabo, akuhlukile inyama amaprotheni. Le mikhiqizo abakhona zonke acid ezibalulekile acid, kanye mithambo ine-elastin collagen. Isibindi, inhliziyo, nolimi, ubuchopho elisetshenziswa umsoco wezokudla. Ziyakwazi ocebile izinto ukufukula hematopoiesis. Izidlo kusukela lezi-imikhiqizo by yokuthuthukisa ukukhishwa elithwala umoya-mpilo, okuyinto ebaluleke kakhulu uma igazi. Basuke Kunconywa ukusebenzisa in yezifo izinso, isimiso sezinzwa, ngemva ukusha kanye nokwethuka. Ngaphezu kwalokho, ivuthwa kahle imikhiqizo inyama kukhona okumnandi nokunomsoco.
Indlela yokusebenzisa i-imikhiqizo?
Lo mkhiqizo ethandwa kakhulu ezweni lethu. Kulo ungakwazi ukupheka omningi ukudla. Kulesi indima ebalulekile eyadlalwa kucutshungulwa offal. Noma yimuphi umkhiqizo kufanele ngokuphelele engahashazanga futhi, kwezinye izimo, futhi cwilisa for ukunambitheka obucayi. Kuyadingeka ukuba asuse ngokucophelela yonke ifilimu futhi streaks. Esikhathini offal kokuqala akufanele kube igazi. uhlobo kakhulu mkhiqizo umnkantsha. Singasho kudliwa eluhlaza noma ayoliswe amakhambi, apula ogayiwe, alimondi amnandi. Isibindi kuyoba yinto ukugcwaliswa esihle kakhulu amakhekhe pancake. Isetshenziselwa yesibili ebalulekile izifundo, ayi futhi pates. Ulimi ngokuvamile esetshenziselwa ukupheka, jellied, ayi okusemathinini ngabhema. Izinso Site izitsha lesibili nelokuqala. Kusukela inhliziyo ukulungiselela ayi isibindi futhi pates. Kusukela ezindlebeni nasemilenzeni - jellies futhi Brawn. A-umkhiqizo - okungukuthi, uma hhayi esikhundleni esiphelele i inyama ezibizayo futhi ayi? A ezihlukahlukene elikhulu mikhiqizo ekuqinisekisa imenyu okumnandi futhi ezihlukahlukene nsuku zonke.
Ngenxa yokuthi zonke eceleni umzimba ehlukile ukunambitheka yayo, ukuminyana, nokunye, kudingeka ukwazi amanye amaqhinga ukupheka. Ngokwesibonelo, isibindi anosawoti ngaphambi nje ngokudla. Ngokwenza lokhu ukupheka kwesikhashana, aphange isidlo, okwenza kube ezomile futhi aqinile. Ukupheka lula, une ukuzigeza, wafaka esitsheni, ucindezele phansi nokucindezelwa nezinyembezi kuphela bese ufaka amanzi bese upheka. Uma ungenalo sokulandela le mithetho, iflothi engasindi kwamanzi.
A-umkhiqizo - kuyini? A liyinqolobane amavithamini namaminerali. Kufanele kube impoqo. Nokho, ungatholi uhileleke kakhulu ngokomzwelo. Abaningi by-imikhiqizo yakhiwa cholesterol. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukuba udle hhayi ningi than kabili ngesonto. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ingaqukatha cadmium kanye nomthofu. ukukhetha ngokucophelela offal eluhlaza. Uma ungabaza, give up ukuthenga. Khumbula ukuthi umkhiqizo yekhwalithi ephansi kungaba nezilwanyana ezincane eziyingozi samanje. Njalo ukhetha ngokucophelela imikhiqizo bamshaya impilo yabo.
Indlela ukukhetha upheke Steak flank?
Indlela ngokushesha ukupheka isaladi beetroot? Kanjani ngokushesha futhi ngendlela efanele ukupheka beet?
Isilinganiso yamanzi nelayisi side izitsha nokusanhlamvu
Lokho kusho ukuthini lol?
Amathoyizi Soft kusukela amasokisi - nice futhi kulula!
Yangaphakathi endometriosis: Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa